bhimphoto: सवारीमा नेपाली उत्पादनको खोजी
सवारीमा नेपाली उत्पादनको खोजी
डा. बाबुराम भट्टर्राईले नेपालमै उत्पादित गाडी हुलासको मुस्ताङ क्याक्सलाई आफ्नो हिड्ने साधन बनाउने खबर त्यसबेला थाहा भयो, जब कम्प्युटर अफ गरेर अफिसबाट घर जाने सुरमा थिएँ । आइतवार बेलुकी करीव साँढे आठ बजे । साथीहरू सबै हिडिसकेका थिए । मेरो बीट अर्थवाणिज्य होइन, यद्यपि डेस्कबाट फोन आएपछि सामान्य समाचार तयार पार्न पछि हट्ने कुरा पनि भएन ।
मुस्ताङ म्याक्स र कारखानाबारेको समाचार बनाउनुपर्ने भयो । सञ्चालक सुरेन्द्र गोल्छाको मोबाइलमा फोन गर्दा गोल्छा अर्गनाइजेशन निवासको एक्सटेन्सन लाइनमा पुग्यो । व्यस्तको संकेत सुनियो । निकै प्रयासपछि पनि उनको नेपाल टेलिकमको नम्बरबाट सम्पर्क हुन सकेन । त्यही नम्बर पनि उद्योग संगठनका कार्यकारी सचिव सोम अधिकारीबाट लिएको थिए । अर्को नम्बरका लागि गोल्छाद्वारा सञ्चालित कारखाना रघुपति जुट मिलमा कार्यरत मेरा मामा मोहनचन्द्र घिमिरेबाट सम्भव भयो । पछिल्लोपटक पाइएको नम्बरबाट पनि सम्पर्क भएन । फेरि पहिलो नम्बर ट्राइ गरियो । यसपटक एक्सटेन्सन अपरेटर भेटिए । उनले भने 'यति राती तपाइलाई उहाले चिन्नु हुन्छ र ।' मैले परिचय दिए अनि प्रयास गरिदिन अनुरोध गरें । केहीबेर होल्डमा बसेपछि सम्पर्क भयो । उनीबाट उनका इन्जिनियर प्रफुल दासको पनि नम्बर पाइयो । यी दुइसगको कुराकानीपछि समाचार तयार पार्न सहज भयो । छापिएको समाचार तल छ ।
सोमबार कारखाना पुगियो । इन्जिनियर दासले गुनासो गरे 'प्रधानमन्त्री नचटेका भए मिडियाले हाम्रो खबरै नलिने रहेछ । हामी कति समस्याबाट गुज्रेका छौ त्यो पनि कुनैबेला आएर सोधिदिनुस् ।' कारखानामा करीव आधा दर्जन गाडी अहिले बनिरहेका रहेछन् । सियो पनि नबन्ने मुलुकमा गाडी । पत्याउन सहज छैन । तर, सबैजसो सवारी सधान हामीले राम्ररी हेरे ब्राण्ड नेम जे भएपनि पाटपुर्जा छुट्टाछुट्टै कम्पनीले बनाएका भेटिन्छन् । कम्प्युटर नै खोलेर हेरे त्यसका बेग्लाबेग्लै सामान बेग्लाबेग्लै कम्पनीले उत्पादन गरेर एउटाले जोडजाड गरि ब्राण्ड नेम ठोकेको भेटिनु अस्वभाविक छैन । गाडी यस्तै रहेछ ।
केही सामान भारतीय कम्पनीबाट , केही चिनिया र केही स्थानीयस्तरमै उत्पादित भेला पारेर जोडेपछि गाडी बनेको रहेछ । जे भएपनि यहा बनेको मानिनु सुखद नै हो । दासका भनाइमा च्यासिज, सीट, बडी, सीसालगायतका सामान नेपालमै बनेका हुन् ।
मुस्ताङ जीपका बारेमा इन्जिनियर दासले खुलेर बताए । यो ६० भन्दा बढि स्पीड कुदाउनका लागि होइन । पहाडी र असजिला बाटाका लागि हो । २५४० सीसी/डिजेल इन्जिन । जति सुविधा चाहिने हो, थप्दै गए दरभाउ घटबढ हुन्छ । १४ लाखदेखि सुरू भएर बढिमा २० लाखसम्म दाम पर्छ । भारतबाट आउने बोलेरो जीप बराबर शक्तिशाली मान्छन् उत्पादक ।
सञ्चारमाध्यमले अबका केही दिन हुलास मुस्ताङ गाडीका विषयमा समाचार खोज्नेछन् । किनभने प्रधानमन्त्रीले सपश लिन यही सवारी बनाए । झण्डा राखियो । गाडी सेलिब्रिटी बन्यो । विराटनगरमा प्रहरीको पर्ूव क्षेत्रीय कार्यालयबाट केही उत्तर हनुमान जुटप्रेस अगाडि यसको कारखाना छ । पुरानो गोदामजस्तो । कारखानामा सोमबारदेखि अर्को छलफल सुरू भएको भेटियो । अहिले प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको गाडी प्यासेन्जर भेहिकल मापदण्डको हो । अर्को दिने । सुविधा थपेर । के के थप्ने । सीट सजिलो बनाउने । तातो-चिसो हुने वातानुकुलित बनाउने । अनि चाहिने जसरी दिन सकिने सबै सुविधा राखेर डेढ महिनाभित्र अर्को दिने । अनि दिन अघि के के चाहिने हो कसलाई सोध्ने । यस्तै छलफल सुनियो ।
सोमबार छापिएको समाचार यस्तो थियो
कस्तो हो मुस्ताङ जिप ?
विराटनगर- डेढ दशकदेखि गाडी उत्पादन गर्दै आएको यहाँको १७ नम्बर वडास्थित हुलास मोटर्स कम्पनीमा इन्जिनियर प्रफुल दास आइतबार निकै हषिर्त थिए । कारण थियो, नवनियुक्त प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको स्वदेशमै उत्पादित गाडी हुलास मुस्ताङ चढ्ने चाहना ।
आइतबार सदनमा निर्वाचन भइरहँदा दास कारखानामा उत्पादन भइरहेका गाडीमध्ये प्रधानमन्त्रीका लागि उपयुक्त हुने के-के सुविधा थप्न सकिन्छ भन्दै योजना गरिरहेका थिए । डा. भट्टराईले मुस्ताङ म्याकस चढ्ने खबर कारखानाभरि सबैले थाहा पाए । हर्ष बाँडे ।
'हामीले अहिले उहाँलाई दिएको डमी गाडी हो,' इन्जिनियर दास भन्छन्, 'बढीमा डेढ महिनाभित्र हामी उहाँलाई मुस्ताङ म्याक्स अत्याधुनिक गाडी उपलब्ध गराउँछौं ।' उनका अनुसार २५४० सीसीको डिजेल इन्जिन उक्त गाडी नेपालका सबैजसो भूभागका लागि उपयोगी छ । मुस्ताङदेखि ताप्लेजुङ र संखुवासभासम्म टेस्ट ड्राइभमा आफैं गएर क्षमता वृद्धिका लागि काम गरेका दास भन्छन्, 'यो बाहिरबाट आयात भइरहेका लग्जरीयस गाडीभन्दा सस्तो, कम खर्चिलो र सर्भिसिङको धेरै झन्झट नपर्ने खालको छ ।'
मुलुककै एकमात्र स्वदेशी गाडी उत्पादक कारखाना प्रतिस्पर्धाको बजारमा आफ्नै गतिमा छ । मुस्ताङ म्याक्स हुलास मोटर्सको सबैभन्दा पछिल्लो उत्पादन हो । किसानका लागि उपयोगी हुने पावरकार्टबाट उत्पादन थालेको उक्त कम्पनीले असजिलो कर प्रणाली र प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा नाक जोगाउनकै लागि काम जारी राखेको महाप्रबन्धक सुरेन्द्र गोल्छा बताउँछन् । भन्छन्, 'हामीले उत्पादन थाल्यौं, कम्पनी नाफामा जान सकेन । तर नाककै लागि पनि उत्पादन रोकेका छैनौं, जारी छ ।'
पछिल्ला एक दशकमा डिजाइनमा गरिएका फेरबदलले हुलास मुस्ताङ म्याक्सम्म आइपुगेको उत्पादन केही राहत दिने खालेको भएको उनले बताए । हुलास मोटर्सले गाडी उत्पादनका लागि केही सामान चीन, केही भारतीय कम्पनी र चेसिजलगायत केही पूर्वाधारका सामान आफैं बनाएर गाडी तयार पार्ने गरेको छ । गोल्छा भन्छन्, 'हाम्रो प्रचार भड्किलो छैन, जसले गाडीको क्षमता बुझ्छन्, उनीहरूले खोज्छन् । हामी बनाएर दिन्छौं ।' उनका अनुसार १४ लाखदेखि सुविधाअनुसार बढीमा २० लाखसम्म पर्ने मुस्ताङ गाडीमा गोरखकालीका टायर प्रयोग गरिएका छन् । सिट र बनोटमा धेरै सामान स्वदेशमै उत्पादन गरिएका उपयोग भएका छन् ।
एउटा लटमा ३/३ दिनको फरक पारेर पाँच गाडी उत्पादन गर्न छिटो गरे ५२ दिन लाग्ने प्राविधिकहरूको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीले नै स्वेदशी गाडी चढ्ने भएपछि उत्पादन प्रवर्द्धनका निकै आशावादी देखिएका गोल्छा भन्छन्, 'धेरै उतारचढाव भोगेर पनि हामीले कारखानालाई बन्द गरेनौं । बरु चाहिने पूर्वाधार थप्दै ल्याएका छौं । नेपाली उत्पादनको दिन फेरिन्छ भन्ने आस लागेको छ ।'
Posted by Bhim Prasad Ghimire at 9:20 PM
content catagory दैनिकी, समाचार/फिचर
समाचार भन्दा समाचार पछि को कुरा रमाइलो हुन्छ । मुस्ताङ गाडि र भट्टराई भन्ने कुरा सुन्दा सुन्दा दिक्क लागिसकेको थियो, यो पढ्दा रमाइलो लाग्यो । शेर्पा, मुस्ताङ गाडि नेपाल मै बन्छ भनेर पहिले सुनिएको थियो, अब प्रधानमन्त्रीले नै यही गाडि चढेपछि केही राम्रो होला कि भन्ने आशा चाँहि छ ।
मुस्ताङ र शेर्प गाडीको बारेमा धेरै पहिले देखी नै सुन्दै आएको हो, तर त्यती बेला यस्तै ४-५ लाख (मरुती कार भन्दा पनि सस्तो) मात्र पर्छ भनेको सुनेको थिए,...खै.... अहिले त
यसरी बाँच्छन् भूषणजी